Rikoooo.com - Concorde Historical Pack anaghị enwe ike ịgba egwu n'ihi ama jijiji na ike ụgbọ elu ndị ọzọ
Packor Historical Pack na-agaghị efe efe n'ihi ihe na-aga n'ihu na ụgbọ elu ndị ọzọ
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • Ederede 13
Jikọtara: 07 Sept 2015, 21:57
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by S1vannah » 21 Julaị 2020, 23:00
Ndewo, unu niile! Ihe ịma aka dị egwu na nchịkwa dị egwu n’elu mbipụta ahụ ka dị maka maka maka Conorde ọhụrụ .. Thisgbọ elu a anaghị akwụ ụgwọ n'oge a n'agbanyeghị mmelite 7 / 20m. Ọ bụ nnukwu ọrụ na-achọ ọrụ! Biko nye ndị mmepe nyocha. Enweghị ike ichere iji fega ya! Cheers!
Jikọtara: 22 Mee 2015, 18:52
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAUL1984 » 26 Julaị 2020, 00:56
Achọputara m otu nsogbu ahụ makana ụgbọ ala emechiri emeghị ihe ọ bụla yana njiri mara 11+ imi elu n'ụgbọ mmiri na COG anaghị arụ ọrụ. Mpempe na-adịghị mma nke ngwanrọ na akụkụ Rikoooo.
Alaghachila m na ụdị Concorde arụgharịrị ọzọ ruo mgbe nsogbu ndị a niile dị.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 26 Julaị 2020, 18:16
Ndewo, ekele maka nzaghachi gị,
Nsogbu dị ebe a bụ na enwere m ndị ọrụ ndị ọzọ na-ekwu na ihe ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọma, Ya mere achọrọ m ka ndị mmadụ bịa ebe a ma kọwaara m ma ha nwere nsogbu ma ọ bụ na ha enweghị. Onwe m enweghị nnukwu ịma jijiji na njikwa ike n’elu ụgbọ oloko, enweghị igwe anaghị agbachi. M na-agbalị imepụtaghachi okwu gị n’enweghị ihe ịga nke ọma. Yabụ m na eche na nsogbu gị nwere ike isi na nke atọ add-on mana enweghị m ike ijide n'aka. Ọzọkwa, igwefoto EZdok add-on nwere ike ibute oke ịma jijiji.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAUL1984 » 27 Julaị 2020, 13:22
Ana m agba ọsọ FSX osisoso na GBOGBO ụgbọ elu tinye ons na rikoooo n'ihi na ha bụ ndị kacha ntụkwasị obi.
M wepụrụ ndị ọzọ addons (nke were m ihe karịrị awa 5) ma wụnye naanị nke a addon ma nweekwa otu nsogbu ahụ, na-agbagha ozizi gị nke ndị ọzọ addon.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 27 Julaị 2020, 15:19
Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike izitere m vidiyo na ihe ndị ahụ na-ama jijiji, ọ ga - enyere m aka ịmegharị okwu gị. Mana tupu nke ahụ, ị ​​ga - anwa ịbanye na joystick gị na - enweghị eriri, jiri akara keyboard gị. Dịkwa njikere ijikwa mmelite kachasị ọhụrụ nke m bulitere n'ụtụtụ a. Ana m ekele gị nke ukwuu
Nyere m aka ime ya nnukwu ngwanrọ
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAUL1984 » 27 Julaị 2020, 16:44
Anaghị m eji ọystụ iji efe ụgbọ elu FSX, ụgbọ ala mechiri emechi ka a ga-ahazi mana etiti nke ike ndọda ka anaghị arụ ọrụ ya ka ọ nọrọ n ’ebe ihe dị ka 24.7% n’ime ụgbọ mmiri mgbe o kwesiri ịbụ 54 ruo 55% na njem nke COG na ụgbọ elu ndị injin ụgbọ elu jikere, nke a ntụgharị na-edobe ndị na-ebugharị ọkụ na igwe 2 ma na-eme ka ọsọ gbapụ n'ihi oke oghere elu imi dị na mach 2.04 @ 60,000 ụkwụ. Nke a bụ mgbe nbudata mmelite ị bulitere n'ụtụtụ a. Enweghị m ike ịchọpụta ihe na-ezighi ezi ọ gwụla ma ọ bụ ihe m amaghị banyere nhazi COG. Agaruola m na nbudata akwụkwọ njikwa ụgbọ elu nke ụgbọ elu British Airways ma soro ya n'akwụkwọ ozi ahụ dabere na ihe nkedo nke Concorde SOP, ihe ọzọ m ga-agwa maka ndụmọdụ ga-abụ ịkpọtụrụ Captain Bannister, Chief Concorde pilot maka ndụmọdụ iji hụ na ọ bụ ya. Ọ B somethingghị ihe ọjọọ m na-eme.
CONCORDEHISTORICPACK.jpg (97.36 KiB) Elere ya ugboro iri abụọ na isii
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by S1vannah » 27 Julaị 2020, 18:44
Ndewo Eric. Thx maka mbọ gị ebe a. Ọ bụ nnukwu mgbakwunye Rikooo. Nke a bụ ahụmịhe m ...
M na-agba P3Dv3 na v5. (32 na 64 bit ọdịiche). Abụọ Concordes arụnyere. Na v3, ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma, enweghị ịma jijiji, mana ndị na - ebuli elu bụ ogologo oge na nwayọ. Na v5 a na m enweta ezigbo ọsọ na-agba ọsọ ọsọ, enwere m reheats na, liftoffs ngwa ngwa ọzọ mana ọ na-arụ ọrụ. Mgbe ihe ruru 250 mara aka ọ na-amalite ịma jijiji na ala. Ka ị na-aga n’ihu ime ọsọ ọsọ ma na-ebuli elu na-ama jijiji na-aka njọ. Enweghị m inyocha okwu. Mgbe m duhie ma gbadata ịma jijiji ahụ na-agbadata ugboro 250, ọ ga-akwụsị. Eleghị anya nke a bụ otu n'ime onyinye kachasị mma na Rikooo ya mere enwere m olileanya na ị ga-ahụ ọgwụgwọ. Daalụ nke ukwuu maka mmasị. M ga-anwale ma zipu vidiyo….
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by S1vannah » 27 Julaị 2020, 22:34
Gbalịrị ibugo vidiyo Windows .mov abụọ nke Windows. Portal Rikooo agaghị ewere usoro ọ bụla belụsọ JPG, JPEG, GIF, PNG, TXT, RTF, PDF, ZIP, TAR.GZ, TGZ, TAR.BZ2 ... thx.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 28 Julaị 2020, 00:24
Ndewo S1vannah, ana m ekele gị maka oge na mbọ gị.
Biko bulite vidiyo gị ebe a https://vimeo.com/upload (Choo "O nweghi ekele" maka akaụntụ n'efu) wee zitere m njikọ ebe a. Ma ọ bụ zitere m vidiyo gị site na peeji m Rikoooo (zitere m ozi) https://www.facebook.com/RikooooSimu/.
M ga-anwa idozi ọtụtụ nsogbu
PAUL1984: Daalụ maka nseta ihuenyo gị ọ na-enyekwa aka iji anya nke uche hụ ihe iseokwu a na COG, Aga m eleba anya na nke a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by superskullmaster » 28 Julaị 2020, 02:11
Nwee okwu a n'onwe m. Enwetabeghị m gburugburu ya ọ na-atụ aro na ọ nwere ike ịbụ modulu A2A accufeel na-emetụta ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị na m ga-eme ụfọdụ tweaking.